musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Vanodanana Michato Honeymoons » Turkey's New Tourism Inotarisa paMichato
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Wedding Tourism inopa huwandu hwemabhenefiti ehupfumi uye inopa hupfumi kunzvimbo yekuenda uye zvakateerana zvikamu muchikamu chekushanya.
Sezvo nyika dzinotanga kuyedza kupora kubva kuCOVID-19, Turkey yakaisa maonero ayo pakushanya kwemuchato.
Imwe nhengo yebhodhi yeAssociation of Turkish Travel Agencies yakati michato inobatsira kupfuura chero imwe mhando yekushanya.
Varidzi vemichato vepasi rese vari kuramba vachiratidza kufarira madhorobha eTurkey eMedithera neAegean anodhura.
World Tourism Network (WTN) uye Nancy Barkley, WTN Coordinator weMuchato Tourism, inotsigira chikamu chekushanyirwa kweTurkey painotendeukira kumasangano emichato epasi rese kuchengetedza kupora kubva kuCOVID-19 denda.
Muna 2019, mari yekushanya yeTurkey yakanga yakwira rekodhi yeUS $34.5 bhiriyoni nevashanyi vanopfuura mamirioni makumi mana neshanu. Muna 45, zvakadaro, kurasikirwa kwenyika kwakarova makumi manomwe muzana nekuda kweCOVID-2020 denda. Nhasi, Kushanya kweTurkey Sector iri kutendeukira kumasangano emichato epasi rose gore rino kuti achengetedze kupora kubva kumatambudziko edenda ririkuenderera mberi.
"Masangano emuchato ane mari yakawanda kupfuura mamwe marudzi ekushanya," Nalan Yesilyurt, nhengo yebhodhi yeAssociation of Turkish Travel Agencies, akaudza Xinhua. "Mari inoshandiswa muvhiki chete mukati memasangano akadai yakaenzana neinopedzwa nevashanyi mumwedzi."
Akataura kuti varidzi vemichato yekunze vanonyanya kufarira maguta eTurkey eMedithera neAegean emahombekombe ekuzorora anopa "akasarudzika uye akasarudzika" masevhisi muchikamu chepamusoro mahotera, marinas, uye maresitorendi. "Bodrum (mupurovhinzi yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweMugla) yakapenya senyeredzi kazhinji nehupenyu hwayo hwakajeka hwehusiku, marinas ane hunyanzvi, ayo anokwezva jet nzanga yachts uye maresitorendi ane mukurumbira chef," Yesilyurt akadaro.
Meya weBodrum Ahmet Aras akati Bodrum iri kudiwa zvakanyanya munyika zhinji dzeEuropean neFar Eastern, uye zvakare inocherechedzwa kubva kunyika dzeArab neMiddle East. Dhorobha rine mahotera makuru uye eboutique ane anopfuura chiuru-mibhedha.
"Zvisinei nedenda uye zvirambidzo, Bodrum yakabata masangano matanhatu emuchato kubva kuIndia gore rino, ayo anga achivimbisa ramangwana," akadaro. Guta iri range richiita hurukuro nemakambani akawanda ari kuronga nezvemichato munguva inotevera.
“Kuita mhemberero dzemichato yekunze munguva yekunze kwemwaka apo uwandu hwevagari vehotera hwakadzikira, zvinobatsira zvikuru chikamu chekushanya muBodrum, kuunza mari uye kuwedzera mikana yemabasa. Vashanyi vanouya kuBodrum kuzochata havangopedzere nguva yavo vari kumahotera asi kuti vanoenda kunotenga nekudyira, vachiita zvinhu zvakawanda,” akawedzera.
Mhemberero dzemichato dzemuIndia dzinobatsira zvikuru vagari venzvimbo iyi sezvo varidzi vemichato vasingabhadhari mari yekuita kuti vaenzi vavo vagadzikane, sekureva kwaMeya. "Vanowanzo bhukira hotera yese vaenzi vavo, vanouya kutaundi nendege hombe dzakahaiwa," akawedzera.
Vanowanzopedza vhiki uye vanonakidzwa nerunako rwechisikigo uye tsika dzenharaunda. Kuhaya mayachts uye kuva nerwendo rwechikepe kuti uone nzvimbo dzisina kubatwa dziri kuve zviitiko zvinonyanya kufarirwa pakati pevashanyi.
Nekuwedzera kwendege dzekunze dzakananga kubva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi munguva iri kuuya kuenda kunhandare yendege yeBodrum, dhorobha rinotarisira kukwezva vamwe "vashanyi vepamusoro".
Kukurumidza kupararira kwemakesi ezuva nezuva eCCIDID-19 munyika yose, zvisinei, kunonetsa vamiriri vekushanya nevakuru venzvimbo. "Chero kubviswa kwekuchengetedza kungareva kurasikirwa kukuru kuindasitiri yese," Aras akadaro.